ခေတ်မီအိုင်စီတီနည်းပညာသုံး အွန်လိုင်းရက်ချိန်းကြိုတင်လျှောက်ထားမှု စနစ်နှင့် ထောက်ခံချက် လက်မှတ်စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်အား စတင်အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတက်ရောက်
နေပြည်တော်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၁)ရက်
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးသည် ယနေ့၊ နံနက်ပိုင်းတွင် အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော ခေတ်မီအိုင်စီတီနည်းပညာသုံး အွန်လိုင်းရက်ချိန်းကြိုတင်လျှောက်ထားမှု စနစ် (Online Booking System)နှင့် ထောက်ခံချက် လက်မှတ်စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်အား (Certificate Information Management System) စတင်အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်၍ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။
• ပြည်သူများ နေ့စဉ် စားသောက် သုံးစွဲနေရသော အစားအသောက်နှင့် အလှကုန်ပစ္စည်းများ၊ နေထိုင်မကောင်းသည့် အခါသောက်သုံးရသည့် ဆေးဝါးများနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာ ပစ္စည်းများ အရည်အသွေးပြည့်မီ စစ်မှန်၍ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းစေရေးအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန (FDA)၏ လုပ်ငန်းများသည် ပြည်သူများ၏ ကျန်းမာရေးအတွက် လွန်စွာအရေးကြီးပါကြောင်း၊
• စားသောက်ကုန်များနှင့် ဆေးဝါးများတွင် ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည့်အရာများ အနည်းငယ်မျှပါဝင်လျှင်ပင် စားသုံးသူတို့၌ ရေရှည်တွင် မကူးစက်တတ်သော ရောဂါများ အပါအဝင် ရောဂါဘယများ ဖြစ်ပွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊
• အလားတူပင် အလှကုန်ပစ္စည်းများသည် အရည်အသွေးမကောင်းမွန်ဘဲ ဘေးအန္တရာယ် ဖြစ်စေနိုင်သည်များ ပါဝင်ပါက သုံးစွဲသူများတွင် အရေပြားရောဂါများအပါအဝင် ကျန်းမာရေး ပြဿနာများ ဖြစ်ပွားလာမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊
• စားသောက်ကုန်များ၊ အလှကုန်ပစ္စည်းများ၊ ဆေးဝါးနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာများ ထုတ်လုပ်တင်သွင်းရောင်းချသူများအနေဖြင့် အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနမှ ထောက်ခံချက်ရယူရာတွင် ကြန့်ကြာမှုများ ရှိပါက စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးမှုများလည်းရှိနိုင်ပါ ကြောင်း၊
• နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ e-Government စနစ် ဖြစ်ထွန်းစေရန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်နှင့် အညီ ဝန်ကြီးဌာနမှလည်း ခေတ်မီအိုင်စီတီ နည်းပညာကိုအသုံးချ၍ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သတင်း အချက်အလက်များနှင့် စစ်တမ်းများ ကောက်ယူခြင်း၊ မှတ်တမ်းများပြုစုခြင်း၊ ကျန်းမာရေး အသိပညာမြှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအတွက် လမ်းညွှန်များဖြန့်ဝေခြင်း၊ စသည်တို့ကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး စဉ်ဆက်မပြတ် ဆေးပညာရေးသင်ကြားရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း ဆောင်ရွက်တော့မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊
• ယခုအခါ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနမှ ခေတ်မီအိုင်စီတီနည်းပညာသုံး အွန်လိုင်းရက်ချိန်းကြိုတင်လျှောက်ထားမှု စနစ်နှင့် ထောက်ခံချက် လက်မှတ်စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်တို့အား စတင်အသုံးပြုတော့မည်ဖြစ်သဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများမှာ ပိုမို လွယ်ကူ မြန်ဆန် တိကျ လာမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊
• ထို့အတွက် အလှကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ဆေးပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ် တင်သွင်းရောင်းချသူများ အနေဖြင့်လည်း လုပ်ငန်းများ ပိုမိုမြန်ဆန်လာမည်ဖြစ်သဖြင့် အဆိုပါလုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ကိုင်သူများ၏ အကျိုးစီးပွားပါ ပိုမိုတိုးတက်လာမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊
• အဆိုပါစနစ်များ လက်တွေ့အသုံးပြုပြီးနောက် အားနည်းချက်နှင့် လိုအပ်ချက်များရှိပါက အသုံးပြုသူများ၏ အကြံပြုချက်များနှင့်အညီ အသုံးပြုရ အလွယ်ကူ အရိုးရှင်းဆုံးဖြစ်စေရန် မွမ်းမံပြင်ဆင်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊
• စားသောက်ကုန်များ၊ ဆေးဝါးနှင့် အလှကုန်ပစ္စည်းများတွင် ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည့် ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများအပါအဝင် ကျန်းမာရေးထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်သည့်အရာများ ပါဝင်မှုအခြေအနေ၊ သုံးစွဲသူများ၏ ကျန်းမာရေးထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်မှုအခြေအနေများ စသည်တို့ကိုလည်း သုတေသနများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်သွားကြစေလိုပါကြောင်း၊
• စားသောက်ကုန်များ၊ ဆေးဝါးနှင့် အလှကုန်ပစ္စည်းများ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေရေး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် ဝန်ကြီးဌာန တစ်ခုတည်းက ဆောင်ရွက်၍ မရဘဲ နှီးနွှယ်ဌာနများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ လုပ်ငန်းရှင်များက ဝိုင်းဝန်း ဆောင်ရွက်မှသာ အောင်မြင်မှုရရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ပါမောက္ခဒေါက်တာခင်ဇော်က ပြောကြားရာတွင် -
• ပြည်သူများ၏ အစားအသောက်၊ ဆေးဝါး၊ ဆေးပစ္စည်းနှင့် အလှကုန်ပစ္စည်းများ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ် (trade facilitation) အား ရှေးရှု၍ ဆေးပစ္စည်းနှင့် အလှကုန်ပစ္စည်းများအတွက် ထောက်ခံချက်ရယူရန် ခေတ်မီအိုင်စီတီနည်းပညာသုံး အွန်လိုင်းရက်ချိန်းကြိုတင်လျှောက်ထားမှု စနစ် (Online Booking System) ကို ဇန်နဝါရီလတွင်လည်းကောင်း၊ ထောက်ခံချက် လက်မှတ်စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်အား (Certificate Information Management System) အား ဖေဖော်ဝါရီလတွင် လည်းကောင်း စတင်အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊
• ဦးစီးဌာနအနေဖြင့် လစဉ် စားသောက်ကုန်အမျိုးအစား (၁၆၀ဝ)ခန့်၊ အလှကုန်အမျိုးအစား (၇၅၀မှ ၁၀ဝ၀)ခန့်၊ ဆေးဝါး (၅၀ဝမှ ၇၅၀)ခန့်နှင့် ဆေးပစ္စည်းကိရိယာ (၁၅၀ဝမှ ၂၀ဝ၀) ခန့်တို့ကို စစ်ဆေးပေးလျက်ရှိပြီး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ အတတ်နိုင်ဆုံး မြန်ဆန်စေရန် ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ဆက်လက်၍ ခေတ်မီအိုင်စီတီနည်းပညာသုံး အွန်လိုင်းရက်ချိန်းကြိုတင်လျှောက်ထားမှု စနစ်နှင့် ထောက်ခံချက် လက်မှတ်စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်တို့နှင့် ပတ်သက်၍ အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာနွယ်ဦး၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာအိကေသွယ်နှင့် လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာဥက္ကာဖြိုး တို့မှ အသီးသီးရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ကြပြီး အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်လာကြ သူများက သိရှိလိုသည်များ မေးမြန်းခဲ့သည်ကို တာဝန်ရှိသူများက ရှင်းလင်းဖြေကြားခဲ့ကြပါသည်။
ခေတ်မီအိုင်စီတီနည်းပညာသုံး အွန်လိုင်းရက်ချိန်းကြိုတင် လျှောက်ထားမှုစနစ်နှင့် ထောက်ခံချက် လက်မှတ်စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်တို့အား Solution Hub ကုမ္ပဏီမှ နည်းပညာ ကူညီပံ့ပိုး မှုဖြင့် စတင်အသုံးပြု ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆေးပစ္စည်းနှင့် အလှကုန်ပစ္စည်းများ အတွက် ထောက်ခံချက်ရယူရန် အွန်လိုင်းရက်ချိန်းကြိုတင် လျှောက်ထားမှု ပြုလုပ်လိုသူများ အနေဖြင့် www. fdamyanmar.gov.mm (သို့မဟုတ်) www. onlineservices.fda.gov.mm တွင် ဝင်ရောက် ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။